‘Hadda ficiladaada kama fal celin karo laakiin banaanka waan kugu heli doonaa!’, Mourinho oo mar wacad ku maray in uu wajiga ka dili doono Wenger – Gool FM
‘Hadda ficiladaada kama fal celin karo laakiin banaanka waan kugu heli doonaa!’, Mourinho oo mar wacad ku maray in uu wajiga ka dili doono Wenger
(London) 23 sebt 2016. Collaada iyo naceybka qotada dheer ee u dhexeeysa Jose Mourinho/Arsene Wenger ayaa ugu dambeyn daboolka la qaaday.
Dagaalka 12-ka sano socday, Mourinho iyo Wenger waxa ay wada galeen loolan qaraar oo afka ah, mar waxa ay la gaartay dagaal jireen oo qaawan oo ku dhexmaray diilinta farsamada.
Is riix riixa u dhexeeya labadan tababare ayaa heer kulkiisa ugu sarreeya gaaray xilligii uu Mourinho ku sugnaa Chelsea, waxa uu hadaladii Wenger ee ahaa “Waxa uu ka baqayaa guul darro” si shaaric ah ih ceeveeyey warbaahinta.
‘Waad ogtihiin waa mid ku takhasusay guul daradda. Sideed sano bilaa ah billad ah, taas waa guul darro. Hadii taas aan ku sameeyo Chelsea waan ka tagayaa London soona laaban maayo,’ ayuu Mourinho ku jawaabay.
Hase ahaatee, book looga hadlayey Mourinho oo uu qoray saxafi Rob Beasley oo hada si taxane ah loogu daabaco Sportsmail waxaa daaha looga rogay dagaalkaas qotada dheer ilaa iyo heerka uu gaaray:
“Maalin waxaan ku heli doonaa banaanka garoonka deedna waxaan bur burin doonaa wajigiisa,’ ayaa la sheegay in uu Mourinho ka yiri Wenger.
Hadaladan laga soo xigtay tababaraha hada ee Manchester United ayaa laga yaabaa in ay yimaadeen kaddib kulankii ka dhacay Stamford Bridge ee ay diilinta isku tuur tuureen.
Waxa ay ahayd Okober 5-teedi 2014, Chelsea ayaa 2-0 uga badisay Arsenal waxaana kulankaas lagu xusuustaa labada tababare oo si carro leh isku kala tuuraya.
‘Wenger waxa uu tababaraha weydiinayey kaarka cas isaga oo ku riix riixaya garsooraha diilinteyda farsamada,” ayuu Wenger dhacdadaas ka yiri. ‘Waxaan ku dhahay ku laabo soonahaaga. Wuu I riixay.
“Waxaan ku dhahay, “Halkan sidaas ayaad ku sameeneysaa, waad ogtahay fal celin ma sameyn karo, laakiin maalin ayaan kugu heli doonaa wadada.”
Ryan Giggs oo lagu wado in uu tababare ka noqdo mid ka mida kooxaha Premier League dhawaan